Tababare Conte oo ku faraxsan in uu sii joogo Chelsea
Tababaraha kooxda Chelsea, Antonio Conte, ayaa sheegay in uu “ku faraxsan yahay” sii joogidda naadigaasi ku guulaystay horyaalka Premier League “sanado badan”.
Tababare Marco Silva oo ka tegay kooxda Hull City
Marco Silva ayaa iska casilay tababarenimada kooxda Hull City, ka dib markii ay ka hartay horyaalka England ee Premier League.
Kooxda Manchester United ayaa ku guulaysatay koobka Europa League-ga kaddib markii ay 2-0 uga adkaatay kooxda Ajax oo ay ku wada dheeleen fiinaalka koobkaasi oo lagu qabtay magaalada Stockholm.
Kooxda Arsenal ayaa ku guuldaraysatay in ay usoo baxdo koobka Horyaallada Yurub ka dib markii ugu horaysay muddo 20 sano ah.
Tababaraha cusub ee Ivory Coast ayaa magacaabay xulkiisii u horreeyay tan iyo markii uu shaqadan la wareegay bishii saddexaad ee sanadkan.
Kubadda ayaa kordhisa kalsoonida ay gabdhaha da'yarta ahi ku qabaan naftooda in ka badan kalsoonida ay ka helaan ciyaaraha kale, sida ay tilmaamayso cilmibaaris ay maalgalisay Uefa.
Booliis ayaa xiray Arday reer Iiraan ah oo aad ugu eg ciyaaryahanka caanka ah ee reer Argentine Lionel Messi.
Conte: Tottenham baa ka fursad wanaagsan Chelsea
Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in Tottenham oo kaalinta labaad ku jirto "ay haysato fursad" ka wanaagsan mida ay kooxdiisu haysato.
Rajadii Tottenham ee horyaalka Ingiriiska oo wiiqantay
Kooxda Tottenham oo ku daba dhagnayd Chelsea, ayaa xalay waxa ay guuldarro qaraar kasoo gaartay ciyaartii ay la dheeshay West Ham, oo ay ka wada dhisan yihiin caasimadda London.
Kooxda Tottenham ayaa xaqiijisay in xagaaga soo socda ee 2017-18 ay kulamadeeda martida loo yahay ku dheeli doonto garoonka Wembley, inta laga dhamaynayo dhismaha ku socda garoonkeeda cusub.
Caawa waxaa jira dagaal hadda waa dagaal faraha looga gubtay, laakiin waa dagaal feer ah, waxaa garoonka Wembley saacadda Afrikada bari marka ay tahay 12-ka saqda dhexe kuna beegan saacadd
Natiijada ciyaartii dhexmartay kooxaha Manchester United iyo Manchester City
Ciyaar aad loo sugayay ayaa xalay dhexmartay kooxaha Manchester United iyo Manchester City
Kooxda Arsenal oo gaartay guul muhiim ah
Kooxda Arsenal ayaa xalay gaartay guul muhiim u ahayd oo ay kaga badisay kooxda Leicester
Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaartay kullankii ay xalay la yeelatay kooxda Southampton.
Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaartay kullankii xalay ay la yeelatay kooxda Southampton. Afar gool iyo labo ayay Chelsea ku garaacday Southamptom oo garoonka Chelsea marti ku ahayd
Taageere kubad oo geeriyooday markii meel kore laga soo tuuray
Taageere kubadeed oo reer Argentine ah ayaa u geeriyooday dhaawac madaxa ka soo gaaray labo maal mood ka hor ka dib markii taageereyaal caraysan ay ka soo tuureen qaybta kore ee garoonka ee ciyaarta laga daawado